FALANQEYN:Magacaabista Tima Cadde & Qowdhan saamayn maku yeelan doontaa khilaafka Denni Iyo Karaash?
May 22, 2020 Mahad Jama 3
GAROWE(P-TIMES)- Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Denni ayaa caawa magacaabay wasiiro iyo wasiiru ku xigeeno, kuwaas oo gaadhaya 8 xubnood.
Wareegto kasoo baxday xafiiska madaxweynaha ayaa waxaa isku shaandheyn iyo magacaabis lagu sameeyey xubno kala duwan, waxaana xilalkoodii laga qaaday wasiirada qaarkood halka kuwo kalen oo cusubna loo magacaabay xilal kala duwan.
Eng. Cabdullahi Cali Xirsi (Tima Cadde) ayaa loo magacaabay wasiirka Wasaaradda Warfaafinta, Isgaadhsiinta iyo Dalxiiska, waxaana uu badalay wasiirkii hore ee wasaaradaasi Korneyl Cali Sabarey.
Dr. C/raxmaan Ibraahim Warsame (Qowdhan) ayaa isna loo magacaabay wasiir ku xigeenka wasaaradda Maaliyadda, waxaana isaga iyo wasiir Tima Cadde oo labadooduba kasoo jeeda gobolka Sool ay magacaabistoodu salka ku haysaa dano siyaasadeed.
Mr. Qowdhan ayaa ahaa shakhsiga kaliya ee loo badinayey hadii ay dhacdo in xilka laga tuuro Axmed Karaash in uu badalo, waxaana magacaabistiisu ay timid kadib markii la tashiyo kala duwan ay dhex mareen saaxiibada madaxweyne Denni iyo Kooxda Aaran Jaan oo uu kamid yahay maadaama isaga iyo Tima Cadde uu ka dhaxeeyo Karaash khilaaf xoogan.
Axmed Karaash iyo wasiiradaha kala ah Qowdhan iyo Tima Cadde ayaa dhamaantoodba kasoo wada jeeda gobolka Sool, waxaana khilaafka Tima Cadde iyo Karaash uu bilaabmay kadib markii Dr. C/weli Gaas madaxweynihii hore uu xilkii wasaaradda arrimaha gudaha u magacaabay wasiir Tima Cadde halka Axmed Karaash oo hore u hayey xilkaasi uu isna u magacaabay wasiirka Duulista iyo Garoomada Puntland.
Xil ka qaadistii Karaash iyo magacaabista Timadde ee Gaas ayaa labadoodaba khilaaf ka dhex abuurtay.
Hirdankii Khaatumo iyo siyaasadii xukuumaddii Faroole ee goboladda Sool, Sanaag iyo Cayn waa mid xurguf ka dhex abuurtay Axmed Karaash iyo wasiir Qowdhan oo xiligaasi ahaa wasiir ku xigeenka Maaliyadda Puntland, waxaana Qowdhan iyo Karaash oo uu soo taxnaa khilaafkoodu ay mar kale ku kulmeen masraxa siyaasada Puntland, kadib markii labadooduba ay u soo istaageen xilka madaxweynaha Puntland sanadkii hore balse Axmed Karaash oo noqday madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa ka manciyey Qowdhan in uu xil ka qabto xukuumadda Denni.
Sababa loo magacaabay labadan masuul ayaa ah in mid walbaaba uu qayb ka noqdo fur furka awooda Karaash uu isku halaynayo, waxaana arintani ay sii xoojin doontaa khilaafka haatan taagan.
Qowdhan waa shakhsi siyaasi ah miisaan culusna ku leh Puntland iyo goboladda uu kasoo jeedo, waxaana dadka aqoonta u leh ay ku tilmaamaan shakhsi ku suntan siyaasad qabow iyo go’aano fog oo ku dhisan caqliyad xoogan balse waa shakhsi uu dagaal kala dhaxeeyo Karaash waana sababta uu Saciid Denni ugu soo daray gollihiisa wasiiradda.
Marka aan si guud u eegno xaalada haatan taagan waxa uu Denni u muuqdaa mid garabyo siyaasadeed oo xoogan ku yeelanaya awooda siyaasadeed ee gobolada SSC maadaama uu keensaday xubno safka hore ka ciyaari doona hirdanka adag ee haatan socda.
Hadaba khilaafka haatan taagan masii xoogaysan doonaa?
Haa waana macquul in uu kasii daro sababtuna waa libaaxyo aan is arki karin oo shabaq la iskugu xareeyey.
Axmed Karaash waa hogaamiye mayal adag rabana cid walba oo dagaal uu kala dhaxeeyo in aysan kasoo muuqan siyaasada Puntland iyo gollaha wasiiradaba, waxaana tusaale inoogu filan in Qowdhan uu bilowgii hore ka hor is taagay in uu noqdo wasiir ku xigeenka Maaliyadda Puntland maadaama uu dagaal kala dhaxeeyey.
Sidoo kale waxa uu is hor taag ku sameeyey magacaabistiisa wasiir Tima Cadde, waxaana uu ku badalay Cali Sabarey.
Xiisadaha haatan taagan waxa ay u muuqdaan kuwo ay sii holcin doonaan labadan xubnood ee caawa la magacaabay oo mid walbaaba Axmed Karaash uu dagaal kala dhaxeeyo, waxaana Denni uu garab ka heli doonaa siyaasiyiin dhowr ah iyo xubno taageersan balse waxaa dhici karta in xal wada gaadho ciid kadib maadaama rajo wacan ay jirto walowse magacaabista caawana ay wax badan sii qaribi doonto maadaama Karaash aan waxba laga weydiin xubnahan la magacaabay
BOQOR DIINI waa in la dhowraa.
Hadalkiisa waa in la maqlaa.
Gu’aamadiisa waa in la fuliya biduuna sharuud..
Waa in laga daba qaadaa: SAMCAN WA DAACAN..
CUMAR MAXAMUUD joojiyaa jalaafadaha.. Sidii la idin la shaqeeyaa.. Waa in aad ula shaqaysaan BOQOR DIINI..Samir yeesha.. kaltankiina suga.. Habartaan calooshaa oo u haqataagaysa XAAR FARMAAJO ha la qabto.. gurigeeda iyo carruteeda iyo seyidkeeda ha la joogto.
PUNTLAND waa mid..kii ka soo horjeestana gacan bidh ah waa in lagu qabtaa..
Cww. Wadanka madaxweyne waxaa ka ah Dani, Madaweyne kuxigen was Karash, Ahmed Karash jabhadeysi dhamatay, wa mamul Madaxwene kolka aad noqotid yeel sida Dani, jooji khilafka dulqado, shoobare puntland uma rabno.aaway Sool iyo Cayn aaway aaway???????
Nin qaawan ayaa qof dharxiran raba inuu usheego sida loo labisto. Horta Karaashow cawradaada asturo oo Sool meeh. Tolkaa hadday Isaaq rabaan xaaraan in wiil dambe oo Hartiga kale ahi kudhinto ilaa aad lugaha isu duwataan. Waa kaa Warsangali bannaan iska mariyey ee maxaa saas kuudiiday. Intaad nacaybca tolkiin kuwaalantihiin ( Majeerteen yaa raba inuu nagumaysto iwm) ayaad dadkii kaharteen oo afkii qal ba meel idumku kudhegey oo dukhsiga iyo dabayshu kaa galeen. Meesha ka kaca oo sida isu dhaama dad baad ahaan jirteene boorka iska jafa.